महादेवले पार्वतीलाई किन रूवाए? गर्भमा ३ महिनाको बच्चा हुँदा विदेश गएका श्रीमानकाे उतै अर्की श्रीमति! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > महादेवले पार्वतीलाई किन रूवाए? गर्भमा ३ महिनाको बच्चा हुँदा विदेश गएका श्रीमानकाे उतै अर्की श्रीमति! (भिडियो हेर्नुस्)
admin September 28, 2020 September 28, 2020 भिडियो, समाज	0
विवाह भएको छोटो समयमा नै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध किन विग्रन्छ । श्रीमान श्रीमतीवाट अभिभावक बनिसकेर पनि सम्बन्ध विग्रदा त्यो बच्चाको भविष्य के होला ? पूर्व नेपाली सेनाका जवाफ जसले प्रेम विवाह गरे । विवाह पछि उनले परिवारकै सल्लाहमा जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी वाहिर गए । पार्वती रावल सुर्खेत माइत रहेकी उनी विवाह गरेर महादेव खड्कासंग विवाह गरेर महेन्द्रनगर पुगेकी थिइन् । उनीहरुको प्रेम विवाह भएको थियो ।
पार्वतीको भिनाजु पनि सेनामै थिए । उनी भिनाजुलाई भेट्न जाँदा महादेवले देखेका थिए । महादेवले नै पार्वतीका भिनाजुसंग उनका बारेमा सबै बुझेका थिए । भिनाजु मार्फत चिनजान भएर उनीहरुको विवाह भएको हो । उनीहरुको काठमाडौमा चिनजान भएको हो । रामवहादुर विष्ट उनको भिनाजुको नाम हो । तलेजु भवानीमा महादेवले ड्युटी गर्थे । आफ्नो वुवाको निधन भएका कारण भिनाजुलाई नै उनले अभिभावकका रुपमा लिएकी थिइन् । त्यसैले भिनाजुसँग महादेवले प्रेम प्रस्ताव राखेको बताएका थिए ।
त्यतिबेला भिनाजुले महादेवका बारेमा राम्रै कुरा गरेपछि उनले विवाह गर्ने निधो गरिन् । घरवाटै भब्य विवाह गर्ने तयारी गरेकै बेलामा पार्वती गर्भवती भइन् । त्यसपछि उनीहरुले मन्दिरमा गएर विवाह गरेका थिए । विवाह पछि महादेवको मोवाइलमा युवतीहरुको फोन आएको थाहा पाएपछि उनले सोधिन् । विवाह भएको केही समयमै अर्की महिलाले महादेवलाई आफ्नो श्रीमान भनेर दावी गर्दै कानुनी प्रकृयामा जाने बताइन् ।
पार्वती गर्भवती भएको तीन महिनामा श्रीमानलाई अर्को महिलाले फोन गरेर महादेव मेरो श्रीमान हो उनीसंग मेरो ५ वर्षको बच्चा छ भनेर श्रीमानलाई फोन गरेको आफुले सुनेको बताइन् । त्यसपछि ति महिलाले आफु प्रहरी इन्सपेक्टर हो भन्दै ज्यान लिने ध म्की दिएको बताइन् । तर केही समय पछि त्यो कुरा त्यसै सेलाईपछि उनी अब परिवारको लागि सेनाको जागिरले पुग्दैन म भिक्टोरिया जान्छु भनेर सल्लाह गरेपछि उनले आफ्नो गहना बेचेर विदेश पठाएकी हुन् ।
उनले त्यसका लागि १० लाख रुपैया जम्मा गरेकी थिइन् । तर विदेश गएपछि पनि राम्रै सम्बन्ध भएक श्रीमानले अचानक विवाह गरेको खबर उनले देवरवाट थाहा पाइन् । उनले काठमाडौमा आएर अर्काको भाँडा माझेर छोरी हुर्काएर बसेकी थिइन् । मध्यरातमा देवरले फोन गरेर दाईको त विवाह भयो भनेर अर्की महिलासंगको तस्बिर पठाएको बताइन् ।
पाँच दिनदेखि बेपत्ता कपडा ब्यापारीको साँचो सहितको मोटरसाइकल र चप्पल बाटोमा